GNOME: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
Sida caadiga ah, waxaan si joogto ah uga hadalnaa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay GNOME3.36, 3,34, 3.32, 3.30, kuwa kale), iyaga kordhin ama ku saabsan qaar dabeecad ahaan o app hooyo gaar ahaan.
Qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa gaar ahaan Waa maxay GNOME? y Sidee loo rakibay GNOME?. Dabcan, diiradda saarida hada Metadistribution (Hooyo Qeybinta) DEBIAN GNU / Linux, taas oo hadda ah Nooca 10, magaca summada Buster. Isku mid ah oo hadda u adeegta aasaas ahaan MX-Linux 19 (Duckling xun).
GNOME waa mid ka mid ah kuwa kale oo badan Deegaanka Desktop (DE) ka dhigaysa nolosha isaga Nidaamka Howlgalka GNU / Linux. Qaybinta badan ee hadda jirana waxay ahayd ama ahayd Deegaanka Desktop default (default)
Waxaa xusid mudan taas, a Deegaanka Desktop es:
"Set Qeyb ka mid ah softiweer si ay u siiso adeegsadaha kombuyuutar is dhexgal saaxiibtinimo iyo raaxo leh. Waa hirgelinta Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka ee bixiya marin u helka iyo qaabeynta qaabeynta, sida baararka qalabka iyo isdhexgalka ka dhexeeya barnaamijyada leh xirfadaha sida jiidista iyo hoos u dhaca.". Wikipedia
Iyo mid Isdhexgalka Isticmaalaha Sawirka (GUI) es:
"… Barnaamij kumbuyuutar oo u shaqeeya sida interface interface, iyadoo la adeegsanayo sawirro iyo walxaha garaafka ah si ay u matalaan macluumaadka iyo ficillada laga heli karo interface-ka. Adeegsigeeda ugu weyni waa in la bixiyo jawi muuqaal oo fudud si loogu oggolaado isgaarsiinta Nidaamka Howlgalka ee mashiinka ama kombiyuutarka". Wikipedia
1 Dhammaan wixii ku saabsan GNOME
Dhammaan wixii ku saabsan GNOME
Waxaa la siidaayay taariikhda 3 Maarso 1999 hadana waa a Deegaanka Desktop loogu talagalay in si fudud oo xarrago leh wax looga qabto Qaybinta GNU / Linux in lagu rakibo kumbuyuutar, taas oo ah, in la fududeeyo isticmaalka iyo hanashada dhammaan howlaha, astaamaha iyo barnaamijyada ka kooban, iyo kuwa kale ee ku hareeraysan Nidaamka hawlgalka. Ama si kale haddii loo dhigo, sii fududaan, sahlanaanta helitaanka iyo kalsoonida adeegsadayaasha.
Magacaaga (GNOME) waa astaamaha loogu talagalay "Deegaanka GNU Network Object Model Model". Waxay ka kooban tahay gebi ahaanba saafi ah Software bilaash ah iyo ilo furan (Fdib iyo Software Open Source - FOSS).
Waa qayb ka mid ah Mashruuca GNOME taas oo ku xidhan Aasaaska GNOME. Waxayna ku saleysan tahay xirmada GTK+.
Waa la beddeli karaa oo wuxuu isticmaalaa X Nidaamka Nidaamka Daaqada Daaqada, inkasta oo ay hadda wanaajinayso is dhexgalka iyada oo Wayland oo sidaas awgeed kor loogu qaadayo astaamaha sida wareejinta dhaqdhaqaaqa, jiida iyo hoos u dhaca, iyo badhanka dhexe oo gujinaya.
Astaamaha hadda muuqda waxaa ka mid ah Barta Bilow iyo iyada menu ugu weyn codsiyada iyo xulashooyinka. Isaga Barta Bilow waxaa loo yaqaan "Hawlaha" waxayna ku dhacdaa asal ahaan dhanka kore ee bidix ee shaashadda waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku kala bedesho meelaha shaqada iyo daaqadaha. Muuqaalkeeda iyo qaabeyntiisa hadda waxaa lagu muujiyey isla markiiba sawirka kore.
Nooca xasiloon ee hadda Deegaanka Desktop-ka ee GNOME waa nambarka nooca 3.34.
Koox shaqo oo wanaagsan iyo taageero urureed oo adag.
Bulsho weyn oo adeegsadayaal ah iyo tabarucayaal.
Joogitaan taariikhi ah oo dhaadheer.
Dukumenti ku filan oo dhameystiran.
Nidaamyada deegaanka ee adag oo adag.
Noockeeda hadda jira (GNOME 3) wuxuu cunaa Kheyraad badan (RAM / CPU) marka la barbardhigo inta badan.
Waxay si xoogan uguxirantahay isticmaalka Systemd.
Kordhinta rasmiga ah
Maxaa ku cusub qaabkii ugu dambeeyay ee xasilloon ee isticmaalayaasha
Maxaa ku cusub sii deyntii ugu dambeysay ee xasilloonida ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Shabakada DEBIAN ee GNOME
Xullo Deegaanka Desktop-ka ee GNOME iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka Desktop-ka ee GNOME, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran GDM3 Maareeyaha Soo Galida.
Nota: Ka dib markii la tijaabiyo Deegaanka Desktop-ka ee GNOME rakibay waad rakibi kartaa barnaamijyo dheeri ah oo dheeri ah iyo waxyaabo muhiim ah isku mid ah, sida, tusaale ahaan:
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «GNOME», mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan maanta adduunka «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GNOME: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Tani waxay u egtahay sida Gnome monograph marka loo eego buugga rakibidda.
Gnome wuxuu u yimaadaa sida desktop-ka caadiga ah ee Debian, waana fudud-hore iyo soo-bax.
Dhibaatada ugu weyn ee isticmaale cusubi la kulmi karo ayaa ah inay u baahan yihiin qalab aan bilaash ahayn, kaas oo lagu talin doono rakibayaha si loo soo dejiyo dibedda
Salaan Autopilot! Waad ku mahadsantahay faalladaada. Xaqiiqdii inkasta oo maqaalku uu yara yar yahay, hadana waa dhameystiran yahay si ay bar bilow fiican ugu noqoto kuwa ka soo bilaabaya Linux iyo agagaaraha Desktop-keeda, kiiskanna, GNOME. Intaas waxaa sii dheer, waa kii ugu horreeyay ee taxane ah dhammaan GNU / Linux Desktop Environments. Waxaan daabici doonnaa midka KDE / Plasma dhawaan.
Nooca cusub ee Linux Kernel 5.5 horey ayaa loo soo saaray waana kuwan wararkiisa
Ku qor liistada cusub Solus 4.1 oo leh Kernel 5.4 iyo in ka badan